Cilmi Baaris Daboolka Ka Qaaday In Cunista Bariisku Hurdada Badiyo Iyo Weliba.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: August 30, 2014, 12:57 pm
Cilmi-baadhis cusub, ayaa sheegtay in cunista bariisku badiso hurdada, isla markaana dadka hurdadu ku yaraato ka caawin karta in ay hurdo fiican helaan.
Daraasadan oo laga qaaday 2,000 waxay khubarada samaysay isku barbardhigeen inta dadkan roodhi iyo baasto quutaan, iyagoo la eegaayey bariiska ay cunaan, kadibna qiyasaayey saacadahay seexdaan, waxaana soo baxday in bariiska si deg deg ah jidhku u burburiyo.
Isla markaana noqda tamar dhiigga iyo jidhka kalena isticmalaan, kadibna jidhku booratiin ka helo, maskaxduna soo dayso maadada kiimikaad ee la yidhaa Serotonin, taasoo keenta in qofku si deg deg ah u luloodo, amma hurdadiisu fiicnaato.
Khubaradan waxay tilmaameen in roodhida iyo baastadu aanay hore u burubrin, taasina ay keento in aan jidhku si deg deg ah nafaqadooda u helin, hab-dhiska dheef-shiidkuna aanu hore ugu burburin.
Cilmi-baadhistay ay samaysay Jaamacada Kanazawa Medical University ee dalak Japan, waxay iftiimisay in bariisku faa’iidada hurdada kaga fiican yahay cuntooyinka kale, noqon karana waxyaabo la siiyo dadka hurdo la’aantu ku dhacdo.